बाजेको सेकुवा प्रकरणले निजिक्षेत्रका व्यवासायी आतंकित | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
बाजेको सेकुवा प्रकरणले निजिक्षेत्रका व्यवासायी आतंकित
व्यवसायीले गल्ती गर्दा व्यवसाय किन बन्द ? कानुनी प्रश्न सरकारमाथि
प्रकाशित मिति १२ असार २०७५, मंगलवार १६:२८ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका एक अभियुक्त चेतनाथ भण्डारी स्वामित्वको ‘बाजेको सेकुवा’ ब्रान्डका रेस्टुरेन्ट बन्द गराएपछि कामदार आन्दोलित छन्। व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा संस्थालाई लक्षित गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारी रबैया प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका भण्डारीले काठमाडौं उपत्यकामा ६ वटा बाजेको सेकुवा कर्नर चलाउँदै आएका थिए। संगठित अपराध ऐनअन्तर्गत भण्डारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छानबिन टोलीले ‘थप अनुसन्धानका लागि’ भन्दै ती रेस्टुरेन्टमा ताला लगाएको छ।
‘हामीले काम गर्ने थलोमा एक्कासि प्रहरी आएर सिलबन्दी गरिदियो। सञ्चालक कुनै अपराधमा मुछियो भन्दैमा उसको संस्था नै बन्द गराउन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ दस वर्षदेखि सेफका रूपमा कार्यरत श्यामसुन्दर हेम्बा श्रेष्ठले भने, ‘भोलि सफाइ पायो भने ब्रान्डलाई परेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?’
श्यामसुन्दरले उठाएको प्रश्न बाजेको सेकुवामा काम गर्ने दुई सय कामदारको रोजगारसँग मात्र जोडिँदैन। यसले कुनै व्यक्ति अपराधमा मुछियो भन्दैमा उसको ब्रान्ड र त्यो ब्रान्डको ‘फ्रेन्चाइज’ (भाडामा प्रयोग गर्ने अधिकार) बन्द गराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न उठेको छ।
‘अहिले त्यहाँ काम गर्नेहरुको सेवासुविधा के हुन्छरु कसैको हाकिमले व्यक्तिगत रुपमा कमजोरी गरेकै भरमा त्यहाँ काम गर्नेले आफ्नो रोजगारीको हक गुमाउनुपर्ने स्थिति बनाउनेरुु उनले भने, ‘भण्डारीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर त्यसको विधि हुन्छ, कानुन हुन्छ। शक्ति छ भन्दैमा सरकारले जबर्जस्ती गर्न पाउँदैन।’
पत्रकारिता गरेको लामै समय भएपनि शहरीया परिवेश मेरालागि नयाँ थियो । बजारको नियमलाई उल्घंन गर्दै बिहान ५ बजे अघिनै…
काठमाडौं । मेलम्चीबाट खानेपानी आइसक्नुअघि नै काठमाडौं उपत्यकाको पाइपदेखि सबै पूर्वाधार ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय(पीआइडी)ले रु….
वामदेवको घरमा विद्रोही नेताको गोप्य बैठक
काठमाडाैं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समितिको पहिलो दिनको बैठक बस्नु अगाडि दोस्रो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले…
भद्रगोलका रक्षा र जिग्री विवाह बन्धनमा
काठमाडौँ । भद्रगोलका चर्चित कलाकार रक्षा र जिग्रीले विवाह गरेका छन् ।तर उनीहरुले बास्तविक जीवनमा नभइ भिडियोका लागी खिचिएको…
आइजी र एआइजीहरुलाई आयुक्त बन्ने रहर
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त तीन उच्च अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुने दौडमा शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।…
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 369 views